Tababar loo soo xiray shaqaale la barayay dabdamiska – idalenews.com
Tababar loo soo xiray shaqaale la barayay dabdamiska
Tababarkan oo ay bixinayeen Macalimiin ka socday ciidamada howlgalka Nabad ilaalinta midowga Afirka ee AMISOM ayaa waxaa ka faa’iideystay shaqaale ka tirsan Dowladda Hoose ee Xamar kuwaas oo loo tababarayay howlaha ku saabsan ka hortagga Musiibooyinka uu sababo dabka iyo sida loo maareeyo damintiisa.
Taliyaha Ciidamada Nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya Andarel Guuti oo ka qeybgalay munaasibadda Xiritaanka tababarka ayaa sheegay in la sii wadi doono tababarada la siinaya shaqaalaha dowladda hoose iyo ciidamada kale ee dowladda Soomaaliya.
Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmad Nuur “Tarsan” ayaa isna halkaasi uga mahadnaqay ciidaamada AMISOM tababarka ay siisay shaqaalaha cusub ee dabdamiska.
Qaar ka mid ah shaqaalahii loo soo xiray siminaarka ayaa sameeyay dhoolatus ay ku muujinayaan waxyaabihii ay ka faa’ideen intii uu socday tababarka.
Tababarkan oo socday muddo Afar Isbuuc ah ayaa waxaa ka faa’iideystay intii uu socday 20 Qof oo loo soo xulay in ay bartaan dab Damiska waxaana tababarka ku soo baxay 16 ka mid ah labaatankii Qof ee la tababarayay kuwaas oo shan ka mid ah dhawaan tababar kale oo dheeraad ah loogu qaadi doono dalka Kenya.
Tartan K/cagta oo loogu magac daray Koobka Nabad oo ka bilowday magaalada Jowhar (Sawirro)